रोग निम्त्याउन सक्छ कब्जियतले | Nepalibiz.com.np ( nepali online directory and news portal site )
रोग निम्त्याउन सक्छ कब्जियतले
हिजोआज धेरै जसो कब्जियतको समस्या भएको व्यक्तिहरु सजिलै भेटिन्छन् । मानिसको सोचाइमा परिवर्तन हुनुको साथै उनीहरुको खानपान जीवनशैलीमा भएको परिवर्तन यसको कारण हो । कब्जियत एउटा रोग नभई सामान्य समस्या हो । तर यहि समस्या विभिन्न गम्भिर रोगहरुको कारण बन्न सक्छ । त्यसैले कब्जियतलाई समय मै जरै देखि उखेलेर फ्याल्नु पर्छ ।
कब्जियत हुनुको विभिन्न कारणहरु हुन सक्छन् । जस्तै ः सुत्ने र उठ्ने कार्य नियमित नहुनु, घरमा सहि रुपमा हावाको आवत जावत हुन नपाउनु, बिहान
पानीको सट्टा अन्य कृत्रिम पेय पदार्थको सेवन गर्नु, बिहान मर्निङ वाल्क नगर्नु आदि ।
कब्जियत कसरी हुन्छ ? र यसले स्वास्थ्यमा कसरी प्रभाव पार्छ त ? हामी दिनमा कम्तिमा दूई पटक खाने कुरा खान्छौ । यदि त्यो खानेकुरा पचिसके पछि पनि हाम्रो आन्द्रामा नै रहिरहन्छ भने कब्जियत हुन्छ । पाचन प्रक्रियाको नियम अनुसार यदि दूई पटक खाना खाइन्छ भने दूई पटक नै टोइलेट जानु पर्छ । यदि दिनको एक पटक टोइलेट गइन्छ तर पेट सफा भएको छैन भने कब्जियत भएको हुन सक्छ । दिनमा दूई तिन पटक टोइलेट जानु र निकै दिन सम्म टोइलेट नहुनु पनि कब्जियतको लक्षण हुन सक्छ । कब्जियतको लक्षण जस्तो सुकै भए पनि यसको कारण पाचन प्रक्रियामा असंतुलन हुनु हो । डाक्टरहरुका अनुसार दुषित खानपानका कारण पाचन शक्ति संतुलित रहन सक्दैन । यस बाहेक सुख्खा खाना खानु, पानी कम पीउनु, चिया तथा कफिको बढि सेवन, धुम्रपान, गुट्खा, रक्सीको सेवन, टाइेलेट लागेको बेला रोक्नु, शारीरिक व्यायाम नगर्नु, परिश्रम गरे पछि आराम नगर्नु, मैदा र बेसन युक्त
तारेको खानाको बढि सेवन, भोक नलागि खान खानु, छिटो, छिटो खानु दिनभरि खानेकुरा खाइरहनु, पिरो तथा मसलादार खानेकुराको बढि सेवन, अचारको सेवन, खानेकुरामा दाल तथा हरियो साग सब्जिको अभाव, खाना साथ काममा लाग्नु आदिले पाचन प्रक्रियामा प्रभाव पार्छ । साथै कालो दाल, राजमा, भिन्डी तथा बासी खानेकुराले पनि कब्जियत हुन्छ ।
कब्जियत भएका व्यक्तिको आँखा भारी महसुस हुने, थकान, मुखको स्वाद बिग्रिने काममा मन नलाग्ने आदि हुन्छ । कहिले काही पेट ग¥हौ भएका कारण दूषित वायू ग्याँस बनेर हृदयलाई पनि प्रभाव पार्छ ।
कब्जियतबाट छुटकारा पाउने तरिका
कब्जियतबाट छुट्कारा पाउनका लागि केहि साधारण र प्राकृतिक उपायहरु छन् ।
– सबैभन्दा पहिला निन्द्रा पूरा गर्नु आवश्यक छ ।
– बिहान उठेर दूई गिलास पानी पीउनुहोस् ।
– टोइलेट जाने रुटिन बनाउनुहोस् । मनिङ वाल्क जाने बानी अपनाउनुहोस्
– हल्का व्यायाम गरेर नुहाईसके पछि हल्का नास्ता गर्नुहोस् ।
– खानुभन्दा पहिले वा खाना खाईसकेको आधा घण्टा पछि पानी पीउनुहोस् ।
– खाना बिस्तारै राम्ररी चपाएर खानु पर्छ । खानाको बिचमा आवश्यक भए मात्र
पानी पीउनु पर्छ ।
– दिनभरिमा ८–१० गिलास पानी अवश्य पीउनु पर्छ ।
– मोटो पिसाएको गहुँको रोटी वा कोदोको रोटी खाने गर्नुपर्छ ।
– घीउँ, नौनी, केरा बाहेक सबै किसिमका फलहरु सलाद तथा अंकुरित अन्नको से
वन गर्नुपर्छ ।
– चीनी तथा त्यसबाट बनेका खानेकुराहरु हानीकारक हुन्छन् । त्यो भन्दा गुँडको सेवन गर्नुहोस् ।
– राती सुत्नु भन्दा दूई घण्टा अघि खाना खानु पर्छ ।
– राती खाना पछि बिस्तारै यताउति आधी घण्टा जति हिड्ने गर्नुपर्छ ।
– बिहान उठेर एक गिलास तातो पानीमा आधा कागती र दूई चम्चा मह हालेर पीउने गर्नुपर्छ ।
– हप्तामा एक पटक व्रत लिने कोशिस गर्नुपर्छ ।
– विना कारणको क्रोधलाई निवारणबाट पनि कब्जियतको समस्या हटाउन सकिन्छ ।